Komal Oli - Singer, journalist, actress
Topic: Komal Oli - Singer, journalist, actress
Author Topic: Komal Oli - Singer, journalist, actress (Read 6693 times)
« on: December 26, 2011, 01:43:39 PM »
कोमल ओली, गायीका
सधैँ चर्चामा रहने गायिका कोमल वलीलाई यतिखेर कार्यक्रममा भ्याइ-नभ्याई छ । रेडियो नेपालकी सञ्चारकर्मीसमेत रहेकी वली जाँगिर खाँदै देश-विदेशमा गीत गाउन पुग्छिन् । आफूलाई कुशल समयको व्यवस्थापक मान्ने वली सांगीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा नेपालको पूर्वी भागमा पुगेका वेला संवाददाता प्रेम बास्तोलाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
गाउँमा हुर्केकी हुँ । घरदेखि स्कुल पुग्न २५ मिनेट लाग्थ्यो । कक्षा सातसम्म गाउँमै पढेँ । सँगै पढेका केही साथीको विवाह भयो, कसैले पढाइ छोडे । तर, मैले पढाइलाई निरन्तरता दिएँ । मेरो ब्याजमा बिए पास गर्ने गाउँको म एकजना मात्रै हँु । तिज, पञ्चमी, गाउँमा हुने पूजाआजामा मेरो अगुवाइमा नाचगान हुन्थ्यो । तर, सानी छँदा मेरो पहिचान खेलाडीको थियो । म भलिबल टिमको क्याप्टेन थिएँ । मैले सार्क र एसियालीस्तरीय भलिबल प्रतियोगितामा पनि भाग लिएकी छु ।
भलिबल खेलाडी कसरी संगीत र सञ्चारक्षेत्रमा आउनुभयो ?
गायिका र सञ्चारकर्मी बन्ने मेरो इच्छा थिएन । मलाई गाउँको शिक्षिका बनाएर गाउँको सेवामा लगाउने र त्यहीँबाट राजनीतिमा लगाउने इच्छा थियो बुबाको । बुबाको इच्छाअनुसार नै शिक्षिका हुँदै राजनीतिमा छिर्ने मेरो पनि इच्छा थियो । तर, कलेज पढ्न सुरु गरेपछि परिस्थिति यसरी बदलिँदै गयो कि कलेजका अतिरिक्त क्रियाकलापमा खुव सक्रिय भएँ । कलेजको लोकदोहोरी प्रतियोगितामा भाग लिन्थेँ र क्यारिकेचर पनि गर्थें । रेडियो नेपालमा कृष्णा ताम्राकार दिदीले समाचार पढेको दुरुस्तै क्यारिकेचर गर्थें । सबै साथी कोमलले असाध्यै राम्रो समाचार पढ्छिन् भनेर प्रशंसा गर्थे । संयोगले ०४९ सालमा रेडियो नेपालले समाचारवाचकका लागि आवेदन माग्यो । मैले परीक्षा पनि दिएँ । उत्तीर्ण भएँ । ०४९ वैशाख १ गतेबाट नै रेडियो नेपालमा काम सुरु गरँे ।
अनि संगीतमा चाहिँ कसरी आउनुभयो ?
विद्यालयमा पढ्दै तारादेवी, ज्ञानु राणा दिदीले गाउनुभएका गीत गाएर सुनाउँथेँ । सरहरूले पनि 'तिमी राम्रो गाउँछ्यौ, गायिका हौ' भन्नुहुन्थ्यो । म स्कुल पढ्दै गर्दा वीरगन्जमा ०४१ सालमा राष्ट्रियस्तरको दोहोरीगीत प्रतियोगिता भयो । त्यहाँ १४ अञ्चलमध्ये १३ ले भाग लिएका थिए । म प्रतियोगितामा म प्रथम भएँ । त्यसपछि सबैले मलाई दोहोरी गायिका भनेर चिन्न थाले । फेरि ०४४ सालमा रेडियो नेपालले लोकगीत कार्यक्रम गरेको थियो । म र मेरी बहिनी -जो रेडियो नेपालमा कार्यक्रम चलाउँछिन्) ले जितिहाल्यौँ । अब स्वर-परीक्षा नै गर्नुपरेन । रेडियो नेपालमा धमाधम गीतहरू रेकर्ड गर्न थाल्यौँ । रेडियो नेपालमा गाउने गायिका कोमल वली भनेर सबैले चिन्न थाले ।
तपाईं रेडियो नेपालको कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ, फेरि देश-विदेश कार्यक्रमका लागि पुगिरहनुभएको छ, समयको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
समयमको व्यवस्थापनमा म असाध्यै ध्यान दिन्छु । अहिले म रेडियो नेपालमा समाचार इन्चार्ज छु । रेडियो नेपालमा काम गरेको पनि १५/१६ वर्ष भयो । त्यो हुनाले म अलि सिनियर पनि भएँ । रेडियो नेपालले मलाई माया गरेको छ । रेडियो नेपालबाटै आवाज सुनाएर मैले आफ्नो नाम पनि कमाएँ । त्यो हिसाबले मैले पूजा गर्ने मेरो मन्दिर पनि हो- रेडियो नेपाल । जब काठमाडौंमा हुन्छु समाचार शाखाको सम्पूर्ण काम गर्छु । समाचार लेख्ने, सम्पादन गर्ने, पढ्ने अरू साथीहरूसँग समन्वय गरेर साथीहरूलाई छुट्टी चाहिएको छ भने आफूले काम गरेर छुट्टी मिलाइदिने गर्छु र म बाहिर जानुपरेमा उनीहरूले नै मलाई सहयोग गर्ने गर्छन् ।
प्रसंग बदलौँ, नेपाली महिला किन पछाडि परेका होलान् ?
महिला स्वयं आफैंले निर्णय गर्ने हैसियतमा पुग्नुपर्छ । हाम्रो समाजमा विवाह गरेर छोरी दिँदा केटाले छोरी पल्न सक्छ/सक्दैन, केटाले कति पढेको छ, केटाको कुलघराना कस्तो छ ? भनेर सोध्छौँ । तर, हाम्री छोरीले ज्वाइँ पाल्न सक्छे/सक्दिन भनेर हेर्दैनौँ । केटा ठिक्क छ भने छोरी दिए के फरक पर्‍यो र ? अब आमाबुबाले छोरीले कमाएर ज्वाइँ पाल्न सक्छे भन्नुपर्छ । सोचमै परिवर्तन आउन जरुरी छ । छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ, ता कि उसको जिन्दगीमा अर्को मान्छे आउँदा पनि गाह्रो नहोस् । दिदीबहिनीहरू जति शिक्षित भए पनि परनिर्भर छन् । श्रीमान्ले नै सबैथोक गरिदेओस् भन्छन् । चाहे शिक्षित होस् या अशिक्षित, महिला घरभित्रै रहन्छिन् । यसकारण अल्छी गर्ने, घरबाहिर निस्कन झर्को मान्ने हुन्छन् । अलिकति हिँड्यो भने खुट्टा दुख्यो भन्ने गर्छन् । यसरी विकास हुन
सक्ला ? पुरुषहरूले आफ्नो क्षेत्रमा गरिरहेका छन् । पुरुष महिलाको विकासका बाधक भनिन्छ तर, पुरुष बाधक होइनन् महिलाको आत्मबल नै बाधक हो । हाम्रो क्षमता नै बाधक हो, हामी अगाडि आएर दुईवटा कुरा बोल्न सक्दैनौँ, अनि अरूलाई दोष लगाउने ?
महिला भएर महिलाकै खोइरो खन्नुभयो त ?
वास्तविकता यही हो । हामी महिलाले नै बढी अरूको आलोचना गर्छौं, किनभने हामी फुर्सदला छौँ । जब मान्छे फुर्सद हुन्छ अनि अरूको कुरा काट्ने काम हुन्छ । मेरै घरमा पनि आमाहरूले टिभीमा सिरियलहरू हेरेर त्यसको कुरा गरेको-देखेको छु । उनीहरूको अर्थहीन काममा समय बितिरहेको हुन्छ । उनीहरूको दिमाग पनि सिरियलले तानिरहेको हुन्छ । यदि उनीहरूले मस्यौरा बनाएर एक प्याकेट बेचे भने भोलि त्यसले उद्योगको रूप लिनसक्छ भन्ने सोच्दैनन् । अर्काको कुरा गरेर समय खेर फाल्नुहुँदैन । तर, विडम्बना हरेक घरमा अहिले यस्तो अवस्था छ । यसर्थ महिलाका विरोधी महिला नै हुन् । पुरुष बाधक भन्ने कुरा त एकछिन आउने कुरा हो । कसैले कुरा गरेर के फरक पर्छ ? तपाईं सत्य हुनुहुन्छ भने केही फरक पर्दैन । हाम्रा आमा, दिदी, बहिनी पनि हाम्रा छोरीहरूलाई सक्षम बनाउनेतिर लाग्दैनन् । उनीहरूलाई घर कसरी चलाउने, श्रीमान्को सेवा कसरी गर्ने, घरभित्रको धन्दा कसरी गर्ने, राम्री कसरी हुने त्यस्ता कुरा मात्र सिकाउँछन् ।
सञ्चारक्षेत्रमा महिलाको अवस्था कस्तो छ नि ?
सम्भावना राम्रो छ । तर, श्रमजीवी पत्रकार ऐन जबसम्म लागू हुन सक्दैन तबसम्म हामी प्रयोग मात्र भइरहने अवस्था छ । चाहिने वेलासम्म पत्रकारलाई प्रयोग गर्ने, नचाहिँदा पत्रकारलाई फाल्ने गरिन्छ । यो एकदमै नाजाइज काम हो । राज्यले पहिला नै सबैको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने थियो । जबसम्म पेसा सुरक्षित हुन सक्दैन तबसम्म महिला अगाडि आउन सक्दैनन् । पहिलाको तुलनामा केही सुधार त छ तर पनि खोजी पत्रकारितामा, रिपोर्टिङमा, फिचरलेखनमा, क्राइम रिपोर्टमा भनौँ न पत्रकारिताको तल्लो तहसम्म पुगेर काम गर्ने कुरामा अझै पनि महिला आउन सकेका छैनन् ।
कलाकारितामा चाहिँ महिला र पुरुषबीच विभेद छ कि छैन ?
अब महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । महिलाले अलिकति बोलेर गीत गाउँदा यो कस्ती उत्ताउली भनिन्छ, तर पुरुषले जे-जे बोल्दा पनि सही हुन्छ । यो पुरुषप्रधान समाज भएर पनि हो । उदाहरणार्थ कोही महिला कलाकार स्टेजमा गएपछि उसको बडी 'स्टक्चर', उमेरबारे चर्चा हुन्छ तर पुरुष कलाकारमा त्यो हुँदैन । जतिसुकै उमेरको होस् सबै पाच्य हुन्छ । गीतमा पनि पुरुषको वर्णन गरिएको गीत छ भने ए.....केटाहरूको बारेमा वर्णन गरिएको भनेर अलि फरक तरिकाले हेरिन्छ । तर, पुरुष कलाकारले महिलाबारे वर्णन गरेको भए पनि खासै फरक रूपमा हेरिँदैन । महिलाले पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकदमै विभेद छ ।
यस्तो विभेदको अन्त्य कसरी होला त ?
अन्त्य न अमेरिकामा भएको छ न त बेलायतमा । सुरुवातको प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै बेलायत-अमेरिका सम्झन्छौँ । त्यसकारण उनीहरूमात्र प्रजातान्त्रिक छन् जस्तो लाग्छ । आ-आफ्नो देशको आ-आफ्नै परिभाषा हुन्छ । हाम्रो पनि आफ्नैखालको सोचाइ छ । यो विभेदको अन्त्य पनि हुँदैन । न म मेरो बाबालाई बाबा भन्न छोड्छु न त मेरो बाबाले मलाई छोरी भनेर तँ भन्न छाड्नुहुन्छ । यदि छोड्यो भने पनि हामीलाई अनौठो लाग्छ । त्यसैले जस्तो किसिमको वातावरण छ त्यसैलाई एडप्ट गर्दै त्यस कुरालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुराचाहिँ मुख्य हो । विभेद अन्त्य गर्नका लागि चाहिँ हामीले घरबाटै सुरु गर्नुपर्‍यो । छोरा र छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनुपर्छ ।
source - nayapatrika
Re: Komal Oli - Singer, journalist, actress
« Reply #1 on: December 26, 2011, 01:45:23 PM »
Komal is unmarried
She is planning to produceamovie soon.
« Reply #2 on: December 26, 2011, 01:45:37 PM »
« Reply #3 on: June 08, 2018, 01:24:16 AM »
A video report about
Komal oli affair with Dhirendra Shah
« Reply #4 on: June 08, 2018, 07:20:43 PM »
« Reply #5 on: June 09, 2018, 10:20:40 AM »